Benigni anoverenga Dante kuQuirinale
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Italy Kuputsa Nhau » Benigni anoverenga Dante kuQuirinale
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • tsika nemagariro • Italy Kuputsa Nhau • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Trending Now • Akasiyana Nhau
Benigni anoverenga Dante
Panguva yemhemberero dze "Dantedi" (zuva raDante) pamberi paMutungamiriri weRepublic of Italy, Sergio Mattarella, uye Gurukota rezvetsika, Dario Franceschini, Roberto Benigni akaverenga XXV Canto del Paradiso muSalone dei Corazzieri kuQuirinale pane live TV.
Benigni akati Dante akanyora Paradise kuti abvise vanhu kubva kusuruvara, chimwe chinhu isu tese chatingashandisa izvozvi.
Chiitiko cheLa divina Commedia chinopembererwa musi waKurume 25 chinova chiitiko chekufa kwaDantes muna1321.
Mukati meichi chiitiko kubva muchirimo kusvika mumatsutso Dante Alighieri naFrancesca da Rimini, anonyanya kuzivikanwa uye anodikanwa kwazvo Divine Comedy hunhu munyika uchapembererwa nemakumi matatu akarongeka zviitiko zvetsika.
Mutambi weTuscan (Mubayiro weNobel) akasimbisa Dante kunyora nhetembo Paradise "kubvisa vanhu kubva kusuruvara, kusuwa, hurombo kwavanozviwana uye kuvatungamira kune mufaro."
Chii chinonzi mufaro kuna Dante? Kuguma kweParadhiso - chechitatu uye chekupedzisira chikamu cheDante's Divine Comedy - ndicho chishuwo chisinga peri icho mumwe nemumwe wedu chaanofanira kuziva pamwe nekubatana nacho chaicho chaMwari. "Mumwe nemumwe wedu," Benigni akadaro, "anonzwa kuti mukati mune moto usingafi mukati, uye Dante anozviziva. Mushure mekuverenga Paradhiso, kana ukaiverenga nekurega ichienda, hauchatarisi kune vamwe vanhu nekukanganiswa kana kusava nehanya, asi sezvipfuva zvezvakavanzika, vatariri vemagumo makuru. ”
Musi waKurume 25, iro zuva rese rakakumikidzwa kuna Dante kupemberera uyu mudetembi mukurusa uyo, mundima dzake, akapa kuzivikanwa kuItari mazana mazhinji emakore isati yave nyika. Basa rake richiri kutaura nesu nhasi renzvimbo dzisinganzwisisike uye dzechokwadi, dzerunako uye dzevanhu mune ese mativi, ine meseji yazvino uye yazvino kupfuura nakare kose.
Zuva iri rinofanirwa kupembererwa nenzira yakasarudzika yekukudza makore mazana manomwe ekufa kwaAlighieri. Ichi ndicho chikonzero muItaly yose, uye kunyanya muFlorence, Ravenna, uye Verona - maguta matatu akakosha munhoroondo yaDante - pane mazana ezviitiko, zvikuru nezvidiki, zvinopa rukudzo kuna Dante neCommedia yake.
Chiitiko ichi chinopembererwa musi waKurume 25 chinova chiitiko chekupemberera kufa kwaDantes muna1321. Nyanzvi dzakacherekedza musi iwoyo kutanga kwerwendo rwekuenda kuupenyu hwapashure peVamwari Vamwari. Iri zuva renyika rakakumikidzwa kuna Dante Alighieri rakagadzwa mu2020 nedare reMakurukota pachisungo cheGurukota Dario Franceschini.
Dante munyika uye zviitiko
Kungwara kwaDante kunozivikanwa nepasi rese uye zvirokwazvo haisi iyo chete Itari inoda kupemberera: kune zviuru zvezviitiko zvakarongwa "kubva pazasi" kumakondinendi ese, nekuda kwezvakangoerekana zvaitika.
Pamusoro peanenge zana akatsigirwa neKomiti yemhemberero dze "Dante 700", pakati peavo vakafemerwa mamuseum, dura, uye maraibhurari eHurumende uye neGuta reDante, kune avo veNational Committee yeMhemberero vanoziva 700th gore rekufa kwaDante Alighieri uye weNational Central Library yeRome - BNCR - ese akaunganidzwa pawebhusaiti: www.muramba.it